I-SAT Iimvavanyo zoMxholo Zidlala indima ebalulekileyo kwezinye iikholeji eziphezulu nakwiiyunivesithi
Ndixoxe nakwezinye iindawo ezimele umgangatho omhle we-SAT ekuhlolweni jikelele , kwaye eli nqaku lithatha umba we-SAT. Uvavanyo lwe-SAT lwama sifundo lusebenzisa isiqingatha esifanayo se-800 njengesi-SAT rhoqo, kodwa musa ukwenza impazamo yokuthelekisa amanqaku amabini. Iikholeji ezifuna iimvavanyo zezifundo ze-SAT zizinye zezona zikhethwa kakhulu kwilizwe. Ngenxa yoko, abafundi abaye bavavanya ukuhlola iimvavanyo bahlala beqinile kuneqela elikhulu labafundi abathatha i-SAT rhoqo.
Yintoni Umlinganiselo we-SAT yesiGaba soVavanyo?
Umyinge wamanqaku kwiimvavanyo zezifundo ngokuqhelekileyo kuma-600s, kwaye iikholeji eziphezulu ziya kubakho ukukhangela amanqaku kuma-700s. Ngokomzekelo, amanqaku aphilileyo kwi-SAT Chemistry yokuvavanya isifundo yayingu-666. Ngokwahlukileyo, amanqaku aphakathi kwe-SAT rhoqo i-500 nganye kwicandelo ngalinye.
Ukufumana amanqaku aphakathi kwisifundo se-SAT sifundo siphumelelo ngaphezu kokufumana amanqaku aphakathi kokuhlolwa jikelele, kuba ukhuphisana neqonga elinamandla elininzi labaphathi beemvavanyo. Oko kwathiwa, abafake izicelo kwiikholeji eziphezulu bavame ukuba ngabafundi ababalaseleyo, ngoko awufuni ukuba ngumyinge ophakathi kwendawo yokufaka isicelo.
I-SAT Izikolo zoVavanyo zoBugcisa ziLungelo lokulahlekelwa
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iimvavanyo zezifundo ze-SAT zilahlekelwe yimbeko phakathi kweeofisi zeekholeji zokumkelwa kule minyaka edluleyo. Izikolo ezininzi ze- Ivy League azifunanga izikolo ze-SAT zovavanyo (nangona ziqhubeka zincoma), kunye nezinye iikholeji ezifana noBryn Mawr baye bathumela kwi-test-admission admissions.
Enyanisweni, kuphela iincinane zeekholeji zifuna iimvavanyo zezifundo ze-SAT kubo bonke abafake izicelo.
Okugqithiseleyo kukho ikholeji efuna izikolo zokuvavanya kwizifundo zabanye abafake izicelo (umzekelo, uvavanyo lweematriki zezifundo zobunjineli), okanye ikholejini efuna ukufumana amanqaku okuvavanya kwisifundo esivela kubafakizicelo basekhaya.
Uyakufumana kwakhona iikholeji ezinomgaqo-nkqubo wokumenywa kwe-test-flexible kwaye uya kwamkela amanqaku ukusuka kuvavanyo lwe-SAT, iimvavanyo ze-AP kunye nezinye iimvavanyo endaweni ye-SAT efana ne-ACT.
Ngaba i-SAT Redesigned SAT iya kubulala i-SAT yezihloko zovavanyo?
Iikholeji eziliqela kunye neeyunivesithi ziye zazisa ukuba ziyaqulunqa iimfuno zabo zokuhlola iimviwo ngenxa ye-SAT ephinda yahlonywa ngo-Matshi ka-2016. I-SAT endala yayifumelwe ukuba "vavanyo" lwaluvivinye amandla akho kunokuba ufunde esikolweni. UMTHETHO, ngakolunye uhlangothi, uhlale uvavanyo lwe "impumelelo" elinga ukulinganisa oko ufunde esikolweni.
Ngenxa yoko, iikholeji ezininzi azizange zifune iimvavanyo zezifundo ze-SAT kubafundi abathatha uMTHETHO ngenxa yokuba umThetho sele ulinganisa ukuphumelela kwabafundi kwizifundo ezahlukeneyo zezifundo. Ngoku ukuba i-SAT ichithe nayiphi na into yokulinganisa "amandla" kwaye ngoku ifana noMTHETHO, imfuneko yokuhlola iimviwo ukulinganisa ulwazi oluthile lomfundi oluthile luyimfuneko. Enyanisweni, andiyikumangaliswa ukubona ukuba iimvavanyo zezifundo ze-SAT zikhethwa ngokuzikhethela kuzo zonke iikholeji kwiminyaka ezayo, kwaye sinokubona ukuba iimviwo ziyabhubha ngokupheleleyo ukuba imfuno iyancipha kakhulu kangangokuthi ayifanelekanga izixhobo zoBhodi zeKholeji ukudala kunye nokulawula iimviwo.
Kodwa okwangoku, abafundi abafaka izicelo kwiikholeji ezininzi eziphezulu bafanele bathathe iimviwo.
SAT Izikolo zoVavanyo lweSihloko ngeSihloko:
Amanqaku aphakathi kweemvavanyo zezifundo ze-SAT ziyahlukahluka ngokuxhomekeke kumxholo wesifundo. Amanqaku angezantsi anikezela ngolwazi lwamanqaku kwezinye zeemvavanyo ezifundwayo zeSAT, ngoko unokuzisebenzisa ukuze ubone indlela olinganisa ngayo nabanye abavanya uvavanyo:
Izikolo zoVavanyo lweeBoology
Izikolo zoVavanyo lweeMviwo zeKhemistry
Izikolo zoVavanyo loPhando lweeNcwadi
Izikolo zoVavanyo lweeMatriki
Izikolo zoVavanyo lweSifundo sePhysics
Ngaba kufuneka uthathe i-SAT yezifundo zovavanyo?
Ukuba uhlahlo lwabiwo-mali luvumela (jonga iindleko ze-SAT ), ndincoma ukuba abafundi abafaka izicelo kwizikolo ezikhethiweyo kakhulu bathathe uvavanyo lwe-SAT. Umzekelo, ukuba uthatha i-AP Biology, qhubela phambili kwaye uthathe i-SAT Biology Subject Test. Kuyinyani ukuba izikolo ezininzi eziphezulu zingadingi iimvavanyo zezifundo, kodwa ezininzi ziyabakhuthaza.
Ukuba ucinga ukuba uya kuqhuba kakuhle kwiimvavanyo zezifundo, ukuzithatha unokongeza olunye uxwebhu lobubungqina kwisicelo sakho ukuba ulungiselelwe kakuhle kwiikholeji.
I-SAT kunye noMTHETHO I-Scores yoLwamkelo kwiiKholeji zeeMaine
Yintoni eyahlukileyo phakathi koLuntu kunye nobuhlanga?
Ithini iXesha elithi "Uxinzelelo olukhethekileyo" okanye "PP" lithetha kwiScuba Diving?
Ukuba iBar Mitzvah
Phuza iLiquids yoKwenziwa koKwenziwa kweNtsebenzo
Ndingafumanaphi Izaphulelo zabafundi beKholeji?